Rajoelina sy Ravalomanana : Hifamototra ? -
AccueilRaharaham-pirenenaRajoelina sy Ravalomanana : Hifamototra ?
Nifanatona tsimoramora ny ankolafy Ravalomanana sy Rajoelina, ka ny tanjona dia tokana ihany : “handrodana ny efa mijoro ankehitriny”. Io no vaovao farany, taorian’ny angom-baovao natao.
Tsy levon’ny vavonin’ny ekipan-dRavalomanana Marc mihitsy ny fahombiazana lehibe azon’ny vadin’ny filoham-pirenena ankehitriny tetsy Antanimbarinandriana. Tontosa soa aman-tsara mantsy ilay fitokanana ny tranom-boky izay natolony ho an’ireo zaza malagasy na dia nosomparan’ny Cua hatramin’ny voalohany aza. Vokatr’izany dia nisy mihitsy ny toromarika avy amin-dry Ravalomanana Marc mivady avy lavitra any, hanao izay fomba rehetra hanozongozonana ity fitondrana ity.
Isan’ny paikady amin’izany ny famoriana an’ireo mpiara-dia amin-dRavalomanana Marc rehetra, ho etsy amin’ny Magro Behoririka amin’ny sabotsy izao. Ireo izay tratra antso dia nantsoina an-telefaonina ary izay tsy tratra antso dia nandefasana hafatra tany anaty facebook. Maro tamin’ireo mpomba an-dRavalomanana kosa anefa no sadaikatra avy hatrany raha nandre ity vaovao ity satria efa mba nahita asa izy ireo kanefa dia terena hanapaka ny asany indray amin’io sabotsy io. Noho ny tsy fanananay asa tamin’izany no nandehananay teny amin’ny Magro. Amin’izao fotoana izao izahay efa mba nahazo asa satria nisokatra ny Agoa ary nisokatra koa ny orinasa afaka haba maro nikatona tamin’ny fifanandrinan’i Andry Rajoelina sy Ravalomanana Marc.
Fa ny tena loza ihany koa, hoy ity mpomba an-dRavalomanana Marc ity, dia ny fahenoan’izy ireo fa ho avy ao amin’ny Magro koa hono ny Mapar. Olona fahavalonay, tamin’izany fotoana ve dia hisolelaka ho tonga ao?
Noho ny fitiavam-pahefana tokoa no voatery nampifanatona an-dRajoelina sy Ravalomanana. Samy te hiverina eo amin’ny fitondrana satria nahita ny tsiron’izany hoe fanangonan-karena tao anatin’ny taona vitsy izany.
Lanonana lehibe ho an’ny Lions eto Madagasikara ny andro anio, amin’ny fandraisana ny filohan’ny Lions clubs iraisam-pirenena ny Chancelier Robert Corlew sy ny vadiny Dianne Corlew miaraka amin’ny delegasiona ofisialy iraisam-pirenena Lions. Ny Lions Chancelier ...Tohiny